Matongerwo eNyika, 04 Kubvumbi 2019
Sangano Rakarerekera kuZanu PF Roratidzira paMuzinda weAmerica muHarare
Nhengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dziri kuratidzira dziri panze pemuzinda weAmerica muHarare dzichiti dzinoda kuti nyika iyi ibvise zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe.
Mapurisa Anorova Mutori weNhau we 263 Chat
Izvi zvakaitika mushure mekunge mumwe mutori wenhau we263 Chat, Lovejoy Mutongwizo, atora mifananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Moyo naFirst Street.
Kurwisana kweZvikwata Zviri muMDC Kwokanganisa Misangano yeKongiresi
Bato rinopikisa reMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa riri kuita misangano yekongiresi mumatunhu aro maduku ose, kana kuti ma district, risati rapinda mumakongiresi ematunhu makuru, kana kuti ma province.
Dhora reRTGS Roramba Richishaya Simba Zvopa Kuti Zvinhu Zvidhure
Dhora remunyika reRTGS riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nerekuAmerica zvopa kuti vashandi vaomerwe nehupenyu
Amai Linda Masarira-Kaingidza Vodzingwa muMDC-T
Mutauriri webato re MDC-T, Amai Linda Masarira-Kaingira, nezuro vakadzingwa mubato iri vachipomerwa mhosva yekupfeka Zambia rekumonera rebato reZanu-PF.
Basa reKuchenesa Nzvimbo Dzakakanganiswa neCyclone Idai kuManicaland Rotanga Kuitwa
Kambani yeEconet yakabatana nevagari vakatanga hurongwa hwekubatsira kuchenesa nzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutumupengo nemafashamu eCyclone Idai mumatunhu eChimanimani neChipinge kuManicaland.
Hurumende neUnited Nations Vobatsira Nherera dzeDutumupengo Idai
Gurukota rinoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu Doctor Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kubatsira nekudzikamisa pfungwa vana vanodarika zviuru zvitatu nemazana masere kuChimanimani chete vakawirwa nedambudziko redutumupengo kana kuti tropical cyclone Idai.
Chikwata cheIMF Choshanyira Zimbabwe
Chikwata chesangano rinokweretesa mari pasi rose, re International Monetary Fund, chiri kushanya munyika murwendo rwacho rwepiri pasi pehurongwa hwe Staff Monitored Programme, uhwo hunotarisirwa kubatsira Zimbabwe kuti ikwanise kuwana zvakare mukana wekukwereteswa mari.